एजेन्सी । क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्यालीमा भेटिएका हिँड्ने पत्थरहरुको राज के हो ? रुसको मस्कोमा भेटिएको तीन हजार वर्ष पूरानो फलामे पेचको पछाडि के रहस्य लुकेको छ ? प्राचीन मेक्सिकन शहरमा आर्किटेक्टले के सोचेर अभ्रख (माइका) को प्रयोग पर्खालमा गरेका थिए ? संसारमा यस्ता कैयन रहस्यहरु छन्, जसलाई अझैसम्म पनि पूरातत्वविद्, भूगर्भविद् तथा वैज्ञानिकहरुलेसमेत सुल्झाउन सकेका छैनन् ।
पृथ्वीमा यस्ता धेरै रहस्यहरु लुकेको पाइन्छ, जसको पर्दा हट्नु जरुरी छ । वैज्ञानिकहरु तथा पूरातत्वविद्हरु यी रहस्य सुल्झाउन लागेको धेरै भयो । यस विषयमा लामो समयदेखि अनुसन्धान भइरहेको छ, तर रहस्य जहाँकोतहीँ । आउनुस् आज हामी तपाईंलाई दुनियाँका यस्ता १३ रहस्यको बारेमा जानकारी दिँदैछौं, जसलाई आजसम्म वैज्ञानिकहरुलेसमेत सुल्झाउन सकेका छैनन् ।
१९७२ मा यस रहस्य सुल्झाउन वैज्ञानिकहरुको एक टीम बनेको थियो । पत्थरको एक ग्रुपको नामाकरण नै गरेर यसमाथि करिब ७ वर्ष अध्ययन गरियो । त्यसक्रममा केरिन नामको ३१७ किलोग्रामको पत्थर ७ वर्षसम्म जहाँकोतहिँ रह्यो । जब अनुसन्धान सकियो, त्यसको ७ वर्षपछि वैज्ञानिकहरु त्यहाँ पुगेर हेर्दा त केरिनले १ किलोमिटर दूरी पार गरिसकेको रहेछ । तर यो कसरी सम्भव भयो, अझै पनि रहस्यको घेरामा छ ।
सहारा मरभूमीमा दुनियाको सबैभन्दा ठूलो रहस्यको रुपमा रहेको पत्थरको संरचना छ । १९७३ मा पुरातत्वशास्त्रीहरु पहिलो पटक त्यहाँ पुगेका थिए । १९९८ मा प्रोफेसर फ्रेड वैंडोर्फको टीमले पत्थरबाट बनेको यस संरचनाको बारेमा लामो अध्ययन गर्यो । अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लाग्यो, यो करिब ईसापूर्व ६००० साल पहिले बनाईएको हो । नाब्टा प्लायामा भेटिएको पत्थरको यस संरचनाबारे अर्को तथ्य पनि पत्ता लाग्यो, यो खगोलशास्त्र र ज्योतिषविज्ञानसँग सम्बन्धित छ । नसुल्झिएको प्रश्न यो हो कि, यतिका शताब्दी पहिले ति मानिसहरुले यति धेरै विकास कसरी गरेका थिए । खगोलशास्त्र र ज्योतिस विज्ञान त्यतिबेलादेखि नै अस्तित्वमा थियो ? यो कुरा आजपनि एउटा रहस्यकोरुपमा रहेको छ ।
तीन हजार वर्ष पूरानो फलामको पेच